Isitudiyo setshe enhliziyweni ye-Entre Deux Mers - I-Airbnb
Isitudiyo setshe enhliziyweni ye-Entre Deux Mers
Romagne, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jennifer
Enkabeni ye-Entre-Deux-Mers, isitudiyo sitholakala e-Romagne, endaweni yewayini endala, endaweni ezolile nefudumele. I-19 km ukusuka e-St Emilion kanye ne-39 km ukusuka e-Bordeaux, ungathola izivini kanye nefa le-Aquitaine (izinqaba, izindlu zasemaphandleni, ama-abbey, amadolobha asendulo, amasonto aseRoma ...) noma uze uzophumula. Ifinyeleleka ngendlela yomjikelezo, imisebenzi eminingi iseduze (imisebenzi yezemidlalo, izimakethe, izindawo zokudlela ...).
Isitudiyo samatshe esihle esifakwe ikhishi elinefriji, i-microwave, iketela, i-toaster kanye nabenzi bekhofi (isihlungi kanye ne-TASSIMO). Ithala elingaphambili lizokuvumela ukuthi ujabulele ngaphandle lapho kuhlangana khona imvelo nezilwane. Awukho umpheki wegesi noma ama-hotplate ekamelweni eliqashiwe kodwa umpheki wegesi, osendlini yesijobelelo sangaphandle, ungenziwa utholakale ngokwezidingo zakho; ezizocaciswa lapho ubhukha (izithombe ezengeziwe uma uzicela njengokufinyelela okunezinyathelo nomnyango omncane ongu-136cm X 70cm). I-studio isendaweni engabiyelwe enezilwane ezifuywayo (izinkukhu, izimvu, amakati) kanye nemivini nxazonke. Indawo yokuhlala ifakwe abantu abakhubazekile ukungena nezicabha ezibanzi. Ukuqashwa kungenzeka ngeviki noma ngenyanga (amaholide, uhambo lwebhizinisi, njll.).
Izilwane ezifuywayo zamukelwe ngaphakathi kwemikhawulo efanelekile (ezocaciswa lapho ubhukha).
4.82 · 22 okushiwo abanye
Uzothola izindawo zokudlela nezindawo zokudlela zokuqala ku-4 km (L'archange, Le Caffe Cuisine, ...), ungavakashela amaCastles emgwaqeni oya eSaint Emilion ku-19 km, vakashela i-Abbey yaseLa Sauve Majeure ku-11 km. , lo Celestine sivale indlela engena emgedeni ka Rauzan at 8 km noma Dolmens ka Bellefond 3 km.
Isuphamakethe kanye nelondolo ku-10km kude.
Ngokuhlala endaweni eseduze, ngingatholakala ngokwezidingo zabahambi namahora ami okusebenza (ngithinte nge-sms).
Ngingajabula ukukwamukela endaweni yami yokuhlala lapho ufika, kodwa ukungena ngokuzimela emagcekeni nakho kungenzeka.
Ngihlala ngitholakala nge-SMS ukuze ngihlangabezane nezidingo zakho ngesikhathi uhlala khona.
Ngingajabula ukukwamukela endaweni yami yokuhlala lapho ufika…
Hlola ezinye izinketho ezise- Romagne namaphethelo